Scraping Websites nePython Uye YakanakaShap - Semalt Advice
Pane huwandu hwakakwana pane internet pamusoro pekutsvaga mawebsite uye mabhuku zvakanaka. Zvatinoda hazvirevi kungoenda kune iyo dheta asi nzira dzisinganzwisisiki dzekuunganidza, kuongorora uye kuronga. Python and BeautifulMoup ndiyo midziyo miviri inoshamisa yekutsvaga mawebhusayithi uye kubvisa deta - maize moisture tester. Mukutsvaga kwewebhu, data inogona kubviswa nyore nyore uye inowanikwa mumutauro waunoda. Kana iwe uri mubhadhari anonyanya kukoshesa nguva yake nemari, iwe zvechokwadi unoda kukurumidzira kuburitsa webhutano nekuita kuti hugadziridzwe sezvaungave.
Tichashandisa zvose Python uye BeautifulSoup semutauro mukuru wokunyora.
1. Kwevashandi veMac, Python inotanga kushandiswa mu OS X. Vanofanira kungozarura Terminal uye kunyoresa python -version . Nenzira iyi, vachakwanisa kuona Python 2.7 version.
2. Kwevashandisi veWindows, tinokurudzira kuisa Python kuburikidza nenzvimbo yayo yepamutemo.
3. Zvadaro, unofanirwa kuenda neLookSoup mabhuku nekubatsira kwepipu. Iyi purafura yekushandisa yakashandiswa kunyanya kuPython.
Muchigarire, unofanira kuisa code inotevera:
pip isa BeautifulSoup4
Mitemo mikuru inofanira kutarisirwa ndeyikuti:
1. Unofanirwa kutarisa Mitemo neMitemo usati watanga nekutsvaga..Saka chenjerera zvikuru!
2. Haufanire kukumbira dhesi kubva panzvimbo idzi zvakare. Ita chokwadi, chigadziro chaunoshandisa chinoita zvine musoro. Kana zvisina kudaro, unogona kuputsa nzvimbo.
3. Chikumbiro chimwechete pamusi wechipiri ndiyo tsika yakarurama.
4. Kugadzikana kweblogi kana nzvimbo kunogona kuchinjwa chero nguva, uye iwe unogona kudzokerazve kunzvimbo iyo uye wonyorazve code yako chero ipi zvayo inoda.
Tsvaira tsora yako peji yePurusi kuti unzwisise kuti chii chinofanira kuitwa. Verenga magwaro akanangana neHTML nePython, uye kubva pamigumisiro, iwe uchaona mitengo mukati ma HTML tags.
Iyi ma tag HTML anowanzouya nenzira ye
Kumira kunze kune Excel CSV
Kana wanyora deta, danho rinotevera nderekurichengetedza pasina. The Excel Comma Separated Format ndiyo sarudzo yakanakisisa munyaya iyi, uye iwe unogona kuivhura zviri nyore mu Excel yako pepa. Asi kutanga, iwe unofanirwa kutumira Python CSV modules uye zuva-time modules kuti inyore data yako zvakanaka. Nhamba inotevera inogona kuiswa muchikamu chekutumira:
kubva panguva yekutumira zuva kusvika panguva yakatarwa )
BeautifulSoup ndechimwe chezvinhu zvakaoma uye zvakazara zvekutsvaga web. Zvisinei, kana uchida kukohwa magwaro akawanda, funga nezveimwe nzira:
1. Chirwere chinhu chinoshamisa uye chinoshamisa che python scraping framework.
2. Unogonawo kuisa purogiramu yacho ne public API. Kubudirira kwe data yako kuchave kwakakosha. Semuenzaniso, unogona kuedza Facebook Graph API, iyo inobatsira kuvanza data uye hairatidze pamapeji epa Facebook.
3. Kunze kweiwo, unogona kushandisa mapurogiramu ekudzorera akadai saMySQL uye kuchengetedza dhambiri yakawanda nekururama kwakakwana.
4. KUTENDA kunomirira "Usazvidzokorora" uye iwe unogona kuedza kushandura mabasa anogara uchishandisa nzira iyi.